DHEGEYSO-Madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in dalka lagu leeyahay 5 Billion oo dayn ah. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in dalka lagu leeyahay 5 Billion oo dayn ah.
Oktoobar 29, 2016 4:03 b 0
Muqdisho, Oct 29 2016–Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh maxamuud,waxa uu sheegay in Soomalaiya xiligan lagu leeyahay lacago aad utira badan taas oo ka hor istaageysa Hormarka ay hiigsaneyso. waxa uu Madaxweynaha Carabka ku dhuftay in 5 Bilyan oo doollar xiligan deyna haan loogu leeyahay Soomaaliya,ma sheegin rasmi ahaan cida ku leh lacagaha aadka ufaraha badan.
Waxa uu hadalkiisa intaasi sii raaciyay in dhowr jeer ay isku dayeen iney lacago kale soo amaahdaan,balse arinkaasi aysan dhicin maadaama lacago hore oo tiro badan laga doonayo.
si soomaaliya ay xiligan lacago uhesho ayuu Madaxweynaha ku sheegay in muhiimada 1aad ay tahay ,in marka hore la xoojiyo awooda kaabayaasha dhaqaale ee dalkan leeyahay.
Sidoo kale Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu tilmaamay in hormarka hada ay sameyneyso Wasaarada Maaliyada Xukuumada Soomaaliya ay qeyb ka tahay qorshayaasha Dowlada ay kaga hortageyso Musuqa lagu8 eedeeyo Dalkan.
Xubnaha aqalka sare ee Hirshabeelle oo ladooranayo iyo xubnaha ugu cadcad.